ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ရုံးခွဲတာဝန်ခံများ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲပြုလုပ် | Ministry of Hotels and Tourism, Myanmar
ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ရုံးခွဲတာဝန်ခံများ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲပြုလုပ်
by MO HT | Sep 11, 2017 | News |0comments
နေပြည်တော်၊ စက်တင်ဘာလ (၁၀)ရက်
မြန်မာနိုင်ငံခရီးသွားလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာ ကြိုတင်ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးအားဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွား ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန လက်အောက်ခံ ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေ သကြီး ရုံးခွဲတာဝန်ခံများနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲကို ယနေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် နေပြည်တော်ရှိ ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ကျောက်စိမ်းခန်းမ၌ကျင်းပပြုလုပ်ရာ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးအုန်းမောင်၊ အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်ဦးရည်မွန်၊ ညွှန်ကြားရေးမှူချုပ် ဦးတင့်သွင်နှင့် ဌာနမှ တာဝန်ရှိသူများ၊ ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီးရုံးခွဲ တာဝန်ခံများ တက်ရောက်ခဲ့ ကြပါသည်။
ဆွေးနွေးပွဲတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးက ယနေ့ပြုလုပ်သည့် အစည်းအဝေးသည် မြန်မာနိုင်ငံခရီးသွား လုပ်ငန်းဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီးနှင့်ပြည်နယ်များရှိ ခရီးသွားဝန်ကြီးများနှင့် ဆွေးနွေးမည့် ညှိနှိုင်း အစည်းအဝေးမတိုင်မီ ကြိုတင် ပြင်ဆင်ရန်ရှိသည်များကို ညှိနှိုင်းသည့် အစည်းအဝေးဖြစ်သည့်အတွက် တိုင်းဒေသ ကြီးနှင့် ပြည်နယ်များမှ ရုံးခွဲတာဝန်ခံများအနေဖြင့် စနစ်တကျနှင့် ပြည့်ပြည့်စုံစုံ ဆွေးနွေးတင်ပြ ကြရန်နှင့် ယနေ့တက် ရောက်လာသူများအား ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွား လုပ်ငန်း ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအချက်(၃)ချက်ကို အသိပေး ဆောင်ရွက်ရန်ရှိပါကြောင်း၊
ပထမအချက်မှာ ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ရေးဆွဲထားသည့် အသစ်ထုတ်ပြန်မည့် မြန်မာ နိုင်ငံခရီးသွားလာရေးဥပဒေသည် မကြာမီ အတည်ပြု ထုတ်ပြန်တော့မည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ဥပဒေပြဌာန်းပြီးနောက် နည်း ဥပဒေများ ဆက်လက်ရေးဆွဲပြီး ယခုဝန်ကြီးဌာနကတာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်နေသည့် ခရီးသွားလုပ်ငန်း များ၏ လုပ်ငန်း လိုင်စင်ဆိုင်ရာများအား တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်များသို့လုပ်ပိုင်ခွင့်များ ဖြန့်ခွဲတော့မည် ဖြစ်သည့်အတွက် အဓိက အကောင်အထည်ဖော်ရမည့် မိမိတို့၏ ရုံးခွဲများအနေဖြင့် ကြိုတင်သိရှိပြင်ဆင်ထားရှိရန် အသိပေးမည် ဖြစ်ပါကြောင်း၊
ဒုတိယအချက်မှာ တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်အသီးသီးတို့တွင် ခရီးသွားလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် မည်သို့စီစဉ်ဆောင်ရွက်ထားသည် မိမိတို့ ပြည်ထောင်စု အစိုးရဘက်မှ မည်သည်တို့ကူညီပံ့ပိုးရန် လိုအပ်မည် စသည့် အချက်များကိုလည်း ကြိုတင်သိရှိလိုပါကြောင်း၊
တတိယအချက်မှာ ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီးအသီးသီးရှိ မိမိတို့ရုံးခွဲများတွင် ဖြစ်ပေါ်နေသည့် အခက်အခဲများ ရှိပါက ခရီးသွားဝန်ကြီးများနှင့် တွေ့ဆုံစဉ် ညှိနှိုင်းပေးရန် လိုအပ်ချက်များအား ဆွေးနွေးတင်ပြစေလို ကြောင်းဖြင့် အမှာစကားပြောကြားပါသည်။
ထို့နောက် ဆွေးနွေးပွဲအစီအစဉ်အရ ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာန မူဝါဒနှင့်ဥပဒေလုပ်ထုံးလုပ်နည်း စစ်ဆေးရေးဌာနခွဲ ညွှန်ကြားရေးမှူးက မြန်မာနိုင်ငံ ခရီးသွား လာရေးဥပဒေ (မူကြမ်း)ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များကို ရှင်းလင်း တင်ပြပြီး၊ ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၏ ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ရုံးခွဲတာဝန်ခံများမှ ဒေသ အလိုက်လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေများ၊ ခရီးသွားလုပ်ငန်း ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရများ၏ လမ်းညွှန်မှုဖြင့် ဆောင်ရွက်နေမှုအခြေ အနေ များအား အသီးသီး ဆွေးနွေးတင်ပြခဲ့ကြပါသည်။
ဆက်လက်၍ ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်များ၊ ဌာနတာဝန်ခံ ညွှန်ကြားရေးမှူးများက ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ များနှင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ဆက်စပ်ဆောင်ရွက်နေမှုများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုမိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများ၊ ဒေသတွင်းနိုင်ငံများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေမှု အခြေအနေများအား ဆွေးနွေးတင်ပြခဲ့ကြပါသည်။
ထို့နောက် ဆွေးနွေးတင်ပြချက်များပေါ် ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်က ပြန်လည်ရှင်းလင်းပြောကြားပြီး အမြဲတမ်း အတွင်းဝန်မှ ဖြည့်စွက်ဆွေးနွေးပါသည်။ ထို့နောက် ပြည်ထောင် စုဝန်ကြီးမှ လိုအပ်သည်များကို ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်း ပေးပြီး တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲကို ညနေပိုင်းတွင်ရုပ်သိမ်းခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
Copyright © MOHT. 2017 All Right Reserved. Powered by Forever Web Studio.